Desperate for a True Leader | rafozan-doza |
Desperate for a True Leader
Published on 05/20,2010
Bon, ataoko fa mazava ny voalazan'ny lohateny. Mila mpitondra, mahay mitondra ary tena tia tanin-drazana (ny vahoaka indrindra indrindra). Samy nanaraka an-tsisiny ny zava-nitranga teto @ tanana doly angamba isika rehetra androany. Fitiavan-tena sy fitiavan-tseza daholo no antony izany ary tsy misy ny hoe manana ny tena rariny rehefa atao ny fandinihana.
Kotozafy ihany no Lexus:
Ndeha hatao hoe "mauvais leader" i ra8. Amiko manokana, tsy ilana adihevitra be izany fa na maro aza ny zavatra tsara nataony teto @ firenena dia betsaka ihany koa ny lesoka nataony. Ary azo ilazana hoe raha mbola i lery no miverina eo dia betsaka ihany sansa hoe hiverina @ zavatra efa nampitroatra ny vahoaka t@ herin-taona ihany isika. Eny nisy vahoaka nitroatra t@ erin-taona, tsy nankasitraka ny fitondran'i ra8. Mety hoe voafitak'ireo mpanao politika izy ireo, maro anisa tokoa, fa tsy manova ny zava-nitranga izany izay hoe nisy olona nitroatra teto.
i tgv moa izany no nampanatena fa hitondra ny fiovana. Akory ny hagagana anefa rehefa nampiseho ny taleta @ fifaintiavana i lery. Izay zavatra tsara nataon'i ra8 nodiana tsy fantatra ary izay zavatra ratsy nataon'i ra8 rehetra dia a peu pres naverina natao daholo. Tsy mila manao litania be eto angamba aho fa jereo ny lagazette DGI* matetika mandefa ny malversation sy ny abus ataon'ny HAT...
Somary gaga ihany moa ah ny @ le hoe manakihana sy manaratsy an'i ra8 no tena asan'ny HAT (etre par in kay no tena fonction officielle an'izy io ee??). i tgv moa tsy atao mahagaga ra mankahala azy. Or, ny zavatra mitranga anefany an, i tgv dia otran'ny hoe copier-coller an'i ra8 mihintsy. Jereo fa namonjy nanendry jeneraly koa lery atao praminisitra (izay mihazona ministera iray ankoatran'io portefeuille io). Dia avy eo samy mody manao geste symbolique hoe hamahana krizy kanefa tsy manova in in akory... dia samy manimba radio/mpanao gazety... dia samy misy miaramila mikomy... dia avy eo misy faty olona... par extrapolation: hisy radio prive 1 sy rnm/tvm ho dorana ato ho ato (quoi que mety hoe specificite an'ny foza iny mais bon on sait jamais) dia mety hifarana @ hoe hisy filoha hametra-pelana/hamindra fahefana @ olon-kafa...
Are we the new Congo?
Niverina en force indray moa ny #fvtm (re dotmg!)... hitako mafinaritra kosa alou ny ambiansa tao @ twitter** ee... enfin, nitazatazana fotsiny ah zany satria tsy mahavita miasa mintsy ra variana manara-baovao be eo... Ny tena nahavariana ahy fotsiny dia fomba fitantaran'ny gazety vahiny ny zavatra mitranga.
Lazain'zala fa hoe "force loyaliste" ny Emmo-reg sy FIS dia hoe "force rebelle" ny FIGN. Tena otran'ny any Congo ve tsika izany letia eee... rehefa dinihana tokoa moa izany raha tsy anneantie ato ho ato ity "gidraka II: revenge of the fallen" ity dia mety hiafara @ situation any Congo isika. Hoe na ny fanjakana na ny rebelle dia mametaveta ny vahoaka daholo... ka tsy efa izany ve moa no iainana izao, na dia hoe mbola litterale le hoe "mametaveta"...
Better yet, Ruanda in the 90s
(!doty) ary raha toa moa ka... izao ra8 no mamonjy mody tampoka? Possible be mintsiny izany izao. Asaina manao diversion fanonganam-panjakana ny miaramila sasany (izay betsaka tokoa ny miandry top sy organisation matotra fotsiny ny ankamaroany) dia lasa hamono afo any ry lehiben'ny tafiky tgv... miditra antsokosoko i ra8 iantsoana vahoaka rapidapida dia izay no nataony.
scenario 2 no mety hitranga. Na hamono olona marobe i tgv (situation 7Feb no miverina) dia voagadra i ra8. Na hanongam-panjakana indray i ra8, dia raikitra wazy ny adi an-trano: foza Vs. zanak'i dada. Aza hitako, aza mahita ahy...
Ny hamisavina an'zao rehetra izao moa dia mba hamelomana ny hoe sens ana-fitiavan-tanindrazana eo @ ireto mpitarika antsika isan'isany. Ny tena idealy moa izany dia raha hoe misy olom-baovao tena manana an'io hoe fitiavan-tanindrazana io, modely @ fanarahan-dalana, tsy hangoron-karena ary mintsinjo ny antoko mpanohitra dia izay no tena tsara indrindra.
Indrisy anefa fa lavitry ny afo ny kitay. Tsy maintsy miaina @ zava-misy isika. Izany hoe ireo efa mpitarika eo no aoka ho tairina, ho tonga saina fa tsy mahasoa ny tanindrazana izao rehetra izao. Tsy misy afa tsy ny fikatsahana ny marimaritra iraisana ihany no vahaolana. Tokony hajanona ny fianteherana @ hoe fahefana an'olon-tokana fa ny herin'ny hoe andrim-panjakana no tokony ho hilomafisana hijoro sy hande @ ara-dalana aorianan'izao tetezamita izao.
Ny tiako hahatongavana eto dia ny hoe tokony apetra tsara daholo ny andrim-panjakana rehetra vao azo lazaina hoe tapitra ny tetezamita. @ izay fotoana izay dia ho voaaron'ny lalana daholo ny tsirairay ary tsy hisy olona afaka hihaom-pefy @ fahefana ananany. Ny tena olana manko dia samy matahotra ny hoe "represailles" ao arinan'ny tetezamita daholo ny ankolafy rehetra. Ka hoy ah hoe tsy aleo miara miasa miara-manomana ny repoblika faha-4 dia atao ny tsy hisian'izany hoe filohan'ny repoblika/praminisitra manao izay tiany hatao izany?
Mba hisian'ny filaminana eto an-tanana dia tsy maintsy manao amnisitia isika. Miala tsiny @ mpomba an'i tgv alou fa izany no marina, tsy hilamina mintsy io kozy io raha tsy asiana amnistie sy reconciliation eto. Marina fa hoe mametraka kolon-tsaina ana-impunite izay fa araka ny efa voalaza hoe tokony iaraha-mametraka daholo ny andrim-panjakana rehetra vao atsahatra ny tetezamita. Singanina manokana eto ny hoe Haute court de justice afaka mitsara ny mpitondra fanjakana. Raha misy izany dia mazava loatra fa tsy hisy intsony ny hoe impunite izany.
Izany akory tsy midika hoe tsy maintsy soniavina any pretoria ny amnistie fa azo atao mihintsy araka ny nolazaina hoe aleo izay depiote voafidy no hanao azy. Fa kosa hoe tokony afaka mody ampilaminana ireo exile miatrika ny fifidianana, justement handresy lahatra ny vahoaka hoe raha tinareo ny hanaovana amnistie an'i ran sy ran dia fidio ny antoko ran. @ zay manko dia hita tokoa hoe safidim-bahoaka ny hamela ny helony... Tsy marimaritra iraisana ve izany ozy nareo? tsy mila ezaka be akory izany fa zavatra efa hataon'ny HAT rahateo. Ry Pierrot, ry Voninahitra sy ry Pety zao mi-roule eraky ny tanana anefa olona voapanga ka hoy ah hoe volonte politika fotsiny no ilaina dia miravona ny zava-drehetra.
Fahendrena ny hoe tsy hilatsahana @ fifidianana mba hampisehoana ny tsy fiandaniana fa fahendrena lehibe lavitra ny hoe tena mitondra @ fiovana milamina sy maharitra hoan'ny tombotsoan'ny firenena. Satria tokoa manko raha mbola misy foana ny exile, sy vahoaka manana alahelo mafy @ fitondrana dia tsy maintsy mbola hisy foana ny krizy, na ho ela na ho aingana. Raha tena hoe "bon leader" tokony mba afaka hitsinjo ny vodiandromerika hoe raha mba izaho tokoa moa izao no lasa mpanohitra dia ahoana? Ambava homana, ampo mieritreritra.
ps: Lava loatra ka miala tsiny ra misy diso tsipelina na teny voatelina... tsy afaka atao edit koa noho ny antony ara-teknika...
* Lagazette DGI no gazety hitako somary objective @ lahatsoratra sasany.
** averiko indray: tsy dia ilaina loatra le "RT" a tt bout de champ re olona o!
Posted by simplex at 21:18 Hametraka hevitra (5) ¦ Verindrohy (trackback) (0) ¦ Dago